Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-agbagharị n'ahịrị atọ - ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya.
Igwe na-adọba ihe na-agbagharị agbagharị na-eji mgbanaka mgbanaka dị elu
The atọ ahiri roller slewing bearing nwere atọ oche mgbanaka, nke kewapụrụ elu, ala na radial raceways, o mere n'ahịrị ọ bụla nke roller ibu ikike nwere ike kpọmkwem na-ebu dị iche iche ibu n'out oge.
Ahịrị atọ nke na-abụghị nke ejikere maka igwe dị arọ
1. Nnyefe ngwa ngwa na ọnụahịa ezi uche dị na ya
2. Anyị nwere ike ịnye EN3.1 na EN3.2 Certificate for Raw Material
3. Anyị nwere ike ịnye CCS maka Slewing Bearing
4. Rola ahịrị atọ nwere nnukwu ibu
5. Anyị nwere ike inyere aka ịhọrọ ụdị ndị kwesịrị ekwesị ma nwee ezigbo ọrụ ahịa
Rola ahịrị atọ na-adịghị edozi ahụ Slewing Bearing 130 Series maka igwe ọrụ dị arọ
1. Ahịrị atọ rola slewing bear nwere nnukwu ibu ikike
2. Oge mmepụta anyị dị gburugburu 40days
3. Anyị nwere ike ịnye ISO9001: 2015, CCS, SGS akwụkwọ
4.We nwere ike ime ka OEM slewing bearing na gị ịbịaru
5. Achọrọ nyocha zuru oke
Ahịrị atọ rola turntable na-ebu ihe mpụga 131.32.800
Ụdị rola atọ dị ahịrị atọ nwere mgbanaka oche atọ.A na-ekewa ụzọ ọsọ ọsọ nke elu na nke ala na radial, ka e wee nwee ike ikpebi ibu nke ahịrị ọ bụla nke rollers nke ọma.Ọ nwere ike iburu ụdị ibu niile n'otu oge.Ọ bụ otu n'ime ngwaahịa anọ nwere ikike ibu ibu.Akụkụ ogwe na radial dị ukwuu na nhazi ahụ siri ike.Ọ dabara nke ọma maka igwe dị arọ chọrọ dayameta buru ibu, dị ka igwe gwupụta ihe ịwụ ịwụ, crane wheel, crane mmiri, crane ọdụ ụgbọ mmiri, igwe ụgbọ mmiri nchara na igwe ụgbọ ala tonnage buru ibu.
Ngwa ime ime rola atọ ahịrị atọ maka krane mmiri
1. Ahịrị atọ rola na-egbu egbu nwere mgbanaka oche atọ
2. Ahịrị atọ nke rola na-egbu egbu nwere ọrụ dị arọ
3. Ahịrị atọ rola na-egbu egbu bụ ikike kachasị ibu
Rola ahịrị atọ nke nwere ibu dị arọ maka kreenụ nwere ụkwụ
1. Anyị na-egbu ụlọ mmepụta ihe
2. mgbanaka egbu egbu dị arọ
3. Oge mmepụta mkpụmkpụ
4. Ahịa ụlọ ọrụ na ọnụahịa asọmpi
Nbunye ụlọ nrụpụta dị elu dị elu nke okpukpu atọ ahịrị ahịrị na-egbu egbu
A na-eji igwe na-egbu egbu n'ahịrị ahịrị atọ eme ihe n'ọtụtụ igwe na-arụ ọrụ dị arọ nke na-achọ nnukwu radius na-arụ ọrụ.
Ọrụ dị arọ dị elu dị elu ahịrị atọ ahịrị Roller Slewing Bearing
1. Njikọ nke ụlọ mmepụta ihe na ịzụ ahịa iji hụ na usoro ọrụ ọ bụla nke ngwaahịa nwere ike ịchịkwa nke ọma.
2. Ịdị mma asọmpi na ọnụ ala dị ala.
3. Teknụzụ dị elu, nkwakọ ngwaahịa ọkachamara, nnyefe ngwa ngwa, na oke osimiri, ala na ngwa agha mepere emepe.
4. Timely mgbe-sales ọrụ ana achi achi na ọrụ, nwere oké ahụmahụ.
XZWD | Ọrụ dị arọ atọ Row Roller Slewing Bearing maka igwe na-agwụ ike ọwara
1.Q: Ị bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
A: Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta ihe na-egbu egbu nwere ahụmahụ afọ 20.
2.Q: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị dị?
A: N'ozuzu, ọ bụ 4-5 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwaahịa dị na ngwaahịa.ma ọ bụ 45 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwaahịa na-adịghị na ngwaahịa, Ọzọkwa ọ bụ dị ka nke ukwu.
3.Q: Ị na-enye ihe atụ?ọ bụ n'efu ka ọ bụ mgbakwunye?
A: Ee, anyị nwere ike ịnye sample, ọ bụ ihe ọzọ.
4.Ajụjụ: Ị nwere ike ịnye nhazi pụrụ iche dịka ọnọdụ ọrụ si dị?
A: N'ezie, anyị nwere ike ịmepụta na ịmepụta bearings slewing maka ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
5.Q: Kedu maka nkwa gị?
A: Anyị na-enye ndụ ogologo mgbe-ahịa oru ọrụ.
ahịrị atọ rola slewing bear
A na-eji mgbanaka oche oche, elu elu orbit. A naghị ekewa orbit na radial orbit n'otu n'otu, ọ na-eme ka e nwee ike ikwenye ibu nke ahịrị ọ bụla nke rollers, na-eme ka ọ rụọ ọrụ dị iche iche n'otu oge. Ike ibu ihe n'ahịrị ahịrị atọ nke na-egbu mgbanaka bụ nke kachasị n'ime ụdị anọ, axial na radial size bụ nke buru ibu ruo n'ókè ụfọdụ, nhazi nke mgbanaka ahịrị atọ Rollre slewing bearing siri ike.